Uk uhlu lwe-imeyili | Thenga Ibhizinisi Nomthengi | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwe-imeyili
Uhlu lwe-imeyili yase-UK lufaka ibhizinisi lase-United Kingdom nohlu lwe-imeyili yabathengi nezinhlu zezisebenzi. Ngabe uzama ukuthola i-United Kingdom B2B & B2C Khetha ohlwini lwe-imeyili? Database lakamuva ziye lwangena UK ibhizinisi kanye database abathengi imeyili. Database lakamuva linalo uhlu lwe-imeyili lase-UK, i-CEO, umphathi wezokumaketha, umnikazi, umlingani wedatha engaphezulu. Uhlu lwe-imeyili yase-UK lunokuvuselelwa kwakamuva. Uhlu lwe-imeyili ephezulu kakhulu nalo lonke ulwazi oludingayo. Uhlu lwe-imeyili yase-UK lunikeza yonke imininingwane yakamuva nevuselelwe. Njengamanje iDatabase Database ingenye yezinkampani zomhlaba ezisebenza kakhulu ngokukhangisa ku-inthanethi. Le nkampani isebenze njengamazwe aphezulu anezibopho eziphelele. Le nkampani isebenze emikhakheni ehlukene kufaka phakathi i-–IT (Ulwazi lwezobuchwepheshe), iMfundo, iSayensi kanye nokukunikeza okuthengi (B2C), Ibhizinisi (B2B), uhlu lwedatha yokuhlala oluvela e-UK.
Inzuzo yohlu lwethu lwe-imeyili lase-UK
Uhlu lwe-imeyili yase-UK luvuselelwa kakhulu futhi uthola imininingwane yezinga le-c kuphela. Uhlu lwethu lokuposa lwe-UK lungempela futhi luqinisekisiwe yimikhankaso yokuthengisa ngama-imeyili e-intanethi neyabantu. Ungathola lonke ibhizinisi langempela nolwazi lomuntu siqu kulolu hlu. Imininingwane yabantu base-United Kingdom kuphela. Ungabona ngezansi ukuthi kungani ungathenga uhlu lwethu lwe-imeyili.
Ukuxhumana kusuka kuwo wonke ama-imeyili nge-imeyili, ifoni, ikheli leposi, nokuningi. Ungaphuthelwa ithuba lakho lokwenza ukuxhumana.
Ungazihluphi ngokuxhumana nama-generics (afana ne-contact @). Ngohlu lwethu, ungathumela i-imeyili abantu bangempela
Landa uhlu lwakho njengefayela le- .csv, ulihlanganise ku-CRM yakho, bese uqala inethiwekhi
Idatha Ye-imeyili Yebhizinisi lase-UK
UK B2B Ikheli le-imeyili
Imininingwane ye-imeyili yebhizinisi lase-UK ifake yonke imininingwane yedatha ye-imeyili yebhizinisi lasekhaya e-United Kingdom. Lolu hlu lwe-imeyili luqukethe i-imeyili yama-imeyili yebhizinisi lase-UK kuphela.
Ungase futhi wenze ngezifiso uhlu lwakho lwe-imeyili yebhizinisi lase-UK. I-imeyili yebhizinisi le-imeyili yebhizinisi lase-UK inamarekhodi okuxhumana angaphezu kwesigidi esigidi futhi inesihloko somsebenzi nayo. Ngaphezu kwakho konke imininingwane ye-imeyili ye-imeyili ye-UK B2b.
Thenga i-imeyili entsha ye-imeyli yase-B2B yase-UKXNUMXBXNUMXB.
Ukuvuselelwa kokugcina: Muva nje
Idatha Ye-imeyili Yabasebenzisi be-UK
UK B2C Ikheli le-imeyili
Uhlu lwe-imeyili yabathengi base-UK lubandakanya yonke imininingwane yokuxhumana yase-UK. Lolu hlu lwe-imeyili lusiza kakhulu ukukhuthaza ibhizinisi lakho e-United Kingdom. Ungathola lonke ikheli lokuxhumana lomuntu siqu kusuka kulolu hlu lwe-imeyili yabathengi base-UK.
Uhlu lwe-imeyili yabathengi base-UK luzokusiza ukuthi ufinyelele kubantu base-UK futhi ungakwazi ukumaketha ibhizinisi lakho e-UK. Uma ufuna ukuthola noma iluphi uhlu lwamakheli noma lwama-imeyili athile avela e-UK ungathintana nethimba lethu. Ngaphezulu kwayo yonke imininingwane yohlu lwabathengi base-UK.
Thenga i-imeyili entsha yabathengi be-imeyili e-New & ebuyekeziwe yase-UK
Inani lamarekhodi: 7 abayizigidi ezingu
Uhlu lwe-imeyili Lase-UK Umbuzo Nempendulo
Uhlu lweDatha Ye-imeyili YaseBrazil